Huawei Mate9— Steemit
*** (9) သိနျးတနျဖုနျး K (5) One hundred thousand if you do not want our friends ??? ***
Win Mobile World's fan friends too worth the price and not enough to introduce an Flagship Device to work: D: D 2016 Model 2018 Date Out now my charts မထငျလိုကျပါနဲ့ were originally released in 2016 December and so far ဖလနျး remains ဖလနျး page: D: D
●●● Highlight Specs of Huawei Mate9●●●
CPU: Kirin 960 Chipset / Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
Back Camera: Dual 20MP + 12MP (f / 2.2, OIS, 2x Zoom, Leica Optics, Phase Detection & Laser Autofocus, Dual-LED (Dual Tone) Flash
Front Camera: 8MP (f / 1.9)
Android Version: 7.0 (Nougat)> Upgradable to 8.0 (Oreo)
Others: Fingerprint (Rear-Mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Barometer, Compass, USB Type C, Quick Charge
Huawei Mate94 / 64GB - 499,000 MMK
Available Color: Champagne Gold, Mocha Brown
(Previous price - 899,000 MMK)
Huawei is all out all Mate Series Premium တနျးဝငျ Series. There are high prices naturally. Huawei Mate9Premium တနျးဝငျ Camera 2nd Generation Leica Dual Camera designed and built. Multi-Camera Function is in use nearlyaProfessional Camera. Evenatypical Leica Camera market is very much designed to be compatible with Leica Camera Huawei Mate9and now nearly half of the previous sale price and purchase price ဖွဈပါတယျခငျဗြာ: D: D.
Huawei Mate9will always be friends, travels Traveling withamemorable photos with friends, Battery mAh, the more you want to play, so long Game friends Camera completely fresh using tons of friends and is very suitable foravery beautiful phone say, sir.
Huawei Mate9Design Premium Design at the holder's use ofalarge screen sizes. Metal Body Holding looks too pig-pig business. Battery 4000mAh, so afteralong charging time is not to worry about. Huawei's SuperCharger system includes ဖွဈပါတယျခငျဗြာ.
Now !!! Lang Premium phone prices so cheap to purchase, so to have the opportunity, let's not miss our friends "Hotline 09785222888, 09443222888," "Hello," I'll need to make sure that: D: D
*** Win Mobile World #AYACreditCard, #CBCreditCard be bought with installment # monthly installment payments (AEON). You may also buy from0Out more about အရဈကစြနဈ https://bit.ly/WMW_Instalment <= You can view this link shortly. ***
Win Mobile World (Main Branch)
No. (48), Shan Kone Street, Myay Ni Kone
San Chaung Tsp.
09 785 222 888 09 443 222 888 09 73 222 888
Win Mobile World (Branch II)
2nd Floor, Myanmar Plaza (HAGL)
Life Square Area.
09 45 222 888609 45 222 888 7
Win Mobile World (Branch III)
02-02, Level 2, City Mall St. John
Corner of Min Ye 'Kyaw Swar Rd and
09 969 796 021 09 969 796 022
*** (၉) သိန်းတန်ဖုန်းတလုံးကို ငွေကျပ် (၅) သိန်းတည်းနဲ့ ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများ မလိုချင်ဘူးလား ??? ***
ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World ရဲ့ အားပေးသူမိတ်ဆွေများအတွက် ဈေးနှုန်းနဲ့ မလိုက်လောက်အောင်ကို တန်လွန်းတဲ့ Flagship Device တခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျ :D :D 2016 Model ဆိုပြီး ယခု 2018 မှာ Date Out နေပြီလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော် 2016 December မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေဆဲပါနော် :D :D
CPU : Kirin 960 Chipset/ Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
RAM/ ROM : 4/64GB
Back Camera : Dual 20MP + 12MP (f/2.2, OIS, 2x Zoom, Leica Optics, Phase Detection & Laser Autofocus, Dual-LED (Dual Tone) Flash
Front Camera : 8MP (f/1.9)
Android Version : 7.0 (Nougat) > Upgradable to 8.0 (Oreo)
Others : Fingerprint (Rear-Mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Barometer, Compass, USB Type C, Quick Charge
Huawei Mate94/64GB - 499,000 MMK
Available Color : Champagne Gold, Mocha Brown
(ယခင်ရောင်းဈေး - 899,000 MMK)
Huawei ကထွက်ခဲ့သမျှ Mate Series တွေအားလုံးဟာ Premium တန်းဝင် Series တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့လည်း အမြင့်တန်းတွေမှာရှိပါတယ်။ ယခု Huawei Mate9မှာတော့ Premium တန်းဝင် အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အပြင် Camera ကို 2nd Generation Leica Dual Camera နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ Camera Function အများအပြားကို တကယ့် Professional Camera နီးပါး အသုံးပြုနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Leica Camera တစ်လုံးတောင် ဈေးကအရမ်းကြီးတာမို့ Leica Camera နဲ့တွဲဖက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Huawei Mate9ကို ယခုဆိုရင် ယခင်ရောင်းဈေးရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးဈေးနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ :D :D ။
Huawei Mate9ကို အမြဲတမ်းခရီးသွားလေ့ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ခရီးသွားတဲ့အခါတိုင်း အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်လေ့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ Battery mAh များများပါတာမို့ Game ကြာကြာဆော့ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ Camera လုံးဝအလန်းအသုံးပြုချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် အင်မတန်သင့်တော်ပြီး တန်လွန်းလှတဲ့ဖုန်းတလုံးလို့ပြောရမှာပါပဲခင်ဗျာ။
Huawei Mate9ရဲ့ Design ပိုင်းကလည်း လုံးဝ Premium Design မျိုးဖြစ်ပြီး Screen Size ကြီးကြီးနဲ့ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုရတာ မိုက်ပါတယ်။ Metal Body နဲ့ဖြစ်ပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ရတာလည်း ကျစ်ကျစ်လှစ်လှစ်ရှိလှပါတယ်။ Battery 4000mAh ပါတာမို့ အားသွင်းချိန်ကြာမြင့်မှာလည်း စိတ်မပူရပါဘူးခင်ဗျာ။ Huawei ရဲ့ SuperCharger စနစ်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကဲ !!! ဒီလောက်လန်းတဲ့ Premium ဖုန်းတလုံးကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများ လက်လွှတ်မခံလိုက်ရအောင် "Hotline - 09785222888, 09443222888" ကို "Hello" လုပ်ထားဖို့တော့လိုမယ်နော် :D :D
*** ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World မှာ #AYACreditCard, #CBCreditCard တွေနဲ့ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်သလို #လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှုစနစ် (AEON) နဲ့လည်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက https://bit.ly/WMW_Instalment <= ဒီလင့်ခ်လေးမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ***
09 785 222 888, 09 443 222 888, 09 73 222 888
09 45 222 888 6, 09 45 222 888 7
#02-02, Level 2, City Mall St. John
Corner of Min Ye' Kyaw Swar Rd and
09 969 796 021, 09 969 796 022
#wafrica #esteem #smartphonephotography #good-karma
Server time: 19:55:35 Account Level: 1
Total XP: 193.05/200.00
And have also receiveda0.29 percent upvote.